Hlola iRio de Janeiro, eBrazil - World Tourism Portal
Hlola iRio de Janeiro, eBrazil
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eRio De Janeiro, eBrazil
Yini okufanele uyenze eRio De Janeiro, eBrazil
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eRio
Bukela ividiyo ngeRio
Hlola iRio de Janeiro idolobha lesibili ngobukhulu kulo Brazil, ogwini oluseningizimu ye-Atlantic. IRio idume ngomhlaba wayo omnandi, isiko lwasolwandle lwasolwandle lwasekhaya nolwenziwa minyaka yonke zomkhosi. Noma kunjalo, amakhono abo ebhola ekhatywayo aqashelwa kahle.
Itheku laseRio de Janeiro lakhiwe ngokungena okungafani nolwandle okwenza kubonakale ngathi ngumlomo womfula. Ngaphezu kwalokho, ichweba lizungezwe yizici zobumnandi bendawo ezibandakanya iShukela Loaf Mountain kumamitha we-395, iCorcovado Peak ngamamitha we-704, namagquma eTijuca ngamamitha we-1,021. Lezi zici zisebenza ngokubambisana ukwenza itheku libe ngomunye weZimangaliso Eziyisikhombisa Zomhlaba.
UCentro kubandakanya uLapa noSanta Teresa. Isikhungo sedolobha sezimali kanye namabhizinisi sinezakhiwo eziningi zomlando kusukela ezinsukwini zaso zokuqala, njenge-Municipal Theatre, National Library, National Museum of Fine Arts, Tiradentes Palace, Metropolitan Cathedral nasePedro Ernesto Palace.
IZona Sul (South Zone) kufaka phakathi iCopacabana, iLeblon ne-Ipanema, kanye nezifunda ezihambisana neFlamengo Beach. Kuqukethe ezinye izindawo ezingomakhelwane ezingaphezulu kanye nezindawo eziningi zezivakashi ezinkulu, njengeRodrigo de Freitas Lagoon, kanye nezintaba zeShukela Loaf nezaseCorcovado.
Zona Norte (North Zone). Inkundla iMaracanã, iQuinta da Boa Vista Park enomnyuziyamu kaZwelonke iZoo yedolobha, iNational Observatory nokuningi.
IZona Oeste (West Zone), indawo engaphansi kwedolobha ekhula ngokushesha kubandakanya izifunda zaseJacarepaguá neBarra da Tijuca, ezidume ngamabhishi ayo. Izindawo eziningi ze-Olimpiki e2016 zazibanjelwe lapho.
Kuyiphutha elijwayelekile ukucabanga ngeRio njengenhloko-dolobha yaseBrazil, umehluko owalahleka ku-21 Ephreli 1960 lapho iBrasilia eyayisanda kwakhiwa yaba inhloko-dolobha. Amabhishi anjengeCopacabana ne-Ipanema, isithombe sikaChristian The Redeemer (Cristo Redentor), inkundla yezemidlalo iMaracanã neThukela Loaf Mountain (Pão de Açúcar) konke kuyizinto ezaziwayo zalokho izakhamizi ezikubiza ngokuthi “idolobha elimangalisayo” (i-cidade maravilotea) , futhi futhi ziphakathi kwezithombe zokuqala ukuphuma ezingqondweni zabahambi, kanye nomkhosi weCarnaval.
Ngokudabukisayo, iningi labantu liyazi neRio ngobudlova bayo nobugebengu. Izinduna zezidakamizwa nemijondolo, noma amachashazi, iyisihloko sezinkinga ezindala kakhulu zomphakathi. Ama-favelas ayizindawo zezindlu ezisezingeni eliphansi, imijondolo ngokuvamile etholakala emithambekeni yezintaba eziningi zedolobha, enamapulangwe anendawo ephakathi nendawo. INingizimu Zone ibambe izindawo eziningi eziseRio namabhishi adume umhlaba, endaweni eyi-43.87 square km kuphela (17 mi²). Abaningi babo baphakathi kokuhamba ibanga lomunye nomunye (ngokwesibonelo, iShukela Loaf ilele nge-8 km / 5 mi from Copacabana beach). Amahhotela amaningi namahostela akhiwe kule ngxenye yedolobha, okucindezelwe phakathi kweTijuca Range (Maciço da Tijuca) nolwandle. Kunezindawo ezibalulekile kwezinye izifunda futhi, njengenkundla iMaracanã eNyakatho Zone kanye nezakhiwo eziningi ezihehayo kulesi Sikhungo.
Yize yayinesizotha futhi incane, iPaço yayiyihhovisi leNkosi yasePortugal kanye namakhosi amabili aseBrazil.
I-Rio yasungulwa e-1565 ngabasePutukezi njengengxenye yokulwa nabazimele baseFrance abathengisa ngokhuni nezimpahla ezivela Brazil. I-Piracy yadlala indima enkulu emlandweni wedolobha, futhi kusenezinqaba zamakholoni okufanele zivakashelwe. AmaPutukezi alwa amaFulentshi iminyaka ecishe ibe yi-10, zombili izinhlangothi zinezizwe zomdabu eziyimbangi njengamadlelandawonye.
Ithrafikhi engxenyeni ethile yeRio ingadina, kepha imoto ingaba yindlela enhle yokufika kumabhishi akude njengeGrumari, futhi lokho kungaba uhambo olwengeziwe. Gwema ukushesha kwethrafikhi eyenzeka ezindaweni ezinjengeCopacabana, iBotafogo, iLaranjeiras, neTijuca, lapho omama befaka izimoto zabo lapho bezolanda izingane zabo ngemuva kwesikole. Thenga imephu, ujabule.
Ezinye izinto ezibonakala eRio
Amabhange enza iMali Exchange kepha ngamagatsha amakhulu amakhulu kanye nezimali ezinkulu. Kungahle kube nekhomishini. Amanani angcono atholakala ezitolo ezinophawu lwe-´'Cambios`` olusekela amanani awo ngenani lesikhulu le-''Parallel ", eliphakeme kancane kunelelo lokuthengiselana ngakho-ke lingcono ukwedlula elizothola ngekhadi lesikweletu I-ATM. Lezi zivame ukutholakala emigwaqweni emikhulu yezentengiselwano, okungukuthi i-Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ibhulokhi elilodwa ukusuka olwandle lweCopacabana ngaphambili, kanye neRua Visconde de Pirajá, amabhlogo amabili ukusuka olwandle lwe-Ipanema. Amanani ayahlukahluka, ngakho-ke buza nxazonke. Isitolo esinikeza ngesilinganiso esihle kakhulu namuhla kungenzeka singanikeli inani elihle kakhulu kusasa ngakho uma ushintsha imali ngaphezu kokubuza kanye futhi.
Imishini inezici ezahlukile, ezibhalwe ngesiPutukezi ngenhla komshini, futhi zonke azibuyiseli imali yamakhadi aphesheya. Izici zingahluka phakathi kwemishini esebhange linye. Uma uzama ukusebenzisa ikhadi langaphandle funa ama-logo weVisa / Mastercard kuma-terminals uqobo namabhange aphesheya (HSBC, Citi) njengezindawo ezinhle kakhulu zokuqalisa. Futhi qaphela ukuthi eRio ngqo, iningi lama-ATM livaliwe phakathi kwe-22: 00 ne-6: 00 (10pm kanye ne-6am) ngakho-ke hlela ngokufanele. Ama-ATM avela eBanco do Brasil asebenza namakhadi we-Visa angaphandle kakhulu. Qaphela ukuthi uma ukhipha imali usebenzisa ikhadi langaphandle, ikhomishini ingangezwa ngaphandle kwesixwayiso kusikrini. Ungahle ungaboni ukuthi ikhomishini yengezwe kokuthengiselweni kwakho uze uthole irisidi lakho ekugcineni kokuthenga! Okwamanje imali yokuthola i-ATM esikhumulweni sezindiza inyusiwe ekuthengisweni ngakunye. Okwezimali ikhomishini yi-30R ngokuthengiselana ngakunye nephesenti lemali oyishintshayo. Ngaphezu kwalokho isilinganiso siyi-10 siye kwi-20% ngaphansi kunedolobha. Imali yokufinyelela kuma-ATM edolobheni futhi amanani ayahluka. Ibhange leSantander likhokhisa i-20R ngokuthenga ngakunye, amanye amabhange awakhokhisi le mali nhlobo.
Lapho uthenga ezentengiselwano zasemgwaqweni, ngaso sonke isikhathi ugobe; lokhu kungehlisa amanani entengo kakhulu. Ukuthengwa kwezitolo ezitolo ezinkulu nasezitolo ezinkulu, kodwa kuvame ukungasho lutho. Kepha abathengisi ngokwemvelo ngeke bahwebe ngaphandle kokuthi ubuze, ikakhulukazi uma ungumvakashi. Kubavakashi, izinto zingakhushulwa kalula yisici se-20% ikakhulukazi ezimakethe ezingekho emthethweni kakhulu ezifana neSaara noma olwandle.
Kungagcinwa kakhulu okuthe xaxa ngezingubo ezenziwa eBrazil, kanye nokungeniswa kwamanye amazwe kwaseYurophu. Izinto eziningi ezingeniswa, noma kunjalo, ezifana ne-elekthronikhi, zivame ukubiza ngokungadingekile ngenxa yemisebenzi yokungenisa yokuvikela. Isibonelo, uzothola amakhamera edijithali athengisela cishe lokho abakuthengisela eYurophu noma e-US
Abaphathi bezitolo eRio bavame ukukhuluma isiNgisi esithile, ngoba lokhu kuzuzisa abasebenzi ukukhushulwa okuzenzakalelayo. Kepha "abanye" bancane kakhulu, ngakho-ke kuyasiza ukufunda okungenani isiPutukezi esiyisisekelo. Ukwazi nje ukubingelela okuyisisekelo, izinombolo, nokuthi ungazibuza kanjani izinkomba namanani entengo kuzokutholela okungenani i- “B” ngokuzikhandla, futhi yize uthola ukuthi omabhalane bezitolo bangasazi isiNgisi ukwedlula isiPhuthukezi, kusengaba lula ukwazi kancane lolimi. Ungesabi ukuphendukela ezinombolweni zokubhala, ezithombeni, noma ekuguquliseni i-pantomime. Abasizi besitolo bavame ukukukhiphela amanani wokubala. IVisa ne-Mastercard bamukelwa kabanzi ngaphakathi Brazil, nge-American Express ngezinga eliphansi kakhulu. Kepha qaphela ukuthi izitolo eziningi zizokwamukela i-Visa noma i-Mastercard, kodwa hhayi zombili! Uma uphethe eyodwa kuphela, funa isibonakaliso ewindini lesitolo ngaphambi kokuzama ukuthenga.
Ukukhetha okuhle kwesipho, ngoba azithathi isikhala esiningi kwipotimende elibuyela ekhaya, ziyi-bikinis, uphawu lokuthengisa oluvela eRio ngekhwalithi yalo nesitayela semfashini.
Izitolo ezinkulu zingatholakala kulo lonke idolobha, ezinamanani ashibhile eZona Norte njenge-Shopping Tijuca ne-Shopping Iguatemi kanye nezindawo zokuthenga eziphezulu ezigxile eZona Sul njenge-Shopping Rio Sul kanye ne-Shopping Leblon neSão Conrado Fashion Mall neBarraShopping eZona Oeste .
Ukuthi uzodlani- isiphuzo eRio
U-Angra dos Reis no-Ilha Grande. I-Angra izungezwe iziqhingi ze-365, enkulu kunazo zonke eyi-Ilha Grande, isiqhingi esihle nesikade sijeziswa ngamabhishi amahle nokuhamba ngezinyawo okuhle. I-Angra ngamahora we-2-3 ukusuka eRio ngemoto futhi kuwukuhamba ngehora elilodwa ngesikebhe ukusuka lapho kuya e-Ilha Grande.
I-Arraial do Cabo yidolobhana eliseduze kwaseBúzios. Amabhishi alo anamanzi amahle kakhulu wesifunda saseRio de Janeiro. Amabhishi anjengeForno nePrainhas do Atalaia azungezwe yizimila zasolwandle eziwubala eziluhlaza futhi anamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka acishe afane I-Caribbean ones.
IBúzios yiphenathi elincane cishe amahora amathathu empumalanga yeRio. Inamabhishi ambalwa, izindawo eziningi zokuhlala kanye nenqwaba yamakilabhu ebusuku.
INiteroi - Isikebhe esiphakathi kweRio neNiteroi, idolobha elingaphesheya kwechibi, uhambo oluhle futhi eshibhile. Kunezinhlobo zezikebhe ezimbalwa, ezisukela eshibhile kakhulu futhi kancane (ezibizwa nge-barca) ziye ezishibhile futhi zishesha (ezibizwa nge-catamarã, ikravan). INiteroi ayinazo izinto eziningi zokuvakasha, kodwa inombono omuhle oyingqayizivele weRio, umnyuziyamu wobuciko obumangalisayo, obukeka njengesaucer ezindizayo edlula olwandle, nendlela yeNiemeyer - ipaki enezakhiwo eziningana kubandakanya inkundla yemidlalo yaseshashalazini - (Konke kuklanywe umdwebi wezakhiwo odumile u-Oscar Niemeyer). Emabhishi amaningi amahle wombuso amahle kakhulu angafinyelelwa kusuka kuleli hlathi lechibi.
I-Paraty - Ihora elilodwa eningizimu ye-Angra, leli yidolobha lama koloni elalondolozwe ngokugcwele olwandle, elifihlwe yizintaba ezinde ezimbozwe yihlathi elaliyindawo yokucasha abaphangi ngemuva kwemikhumbi yasePortugal; kumele ubone kubantu abanentshisekelo Kumlando Namasiko; futhi ilungele ukugibela ama-rainforest kanye nokuhamba ngezinyawo.
I-Paquetá - Yize ingekho ngqo ngaphandle kweRio, ngoba iyisiqhingi futhi ingafinyelelwa kuphela ngesikebhe sokuhamba ngesikebhe sama-70, lesi sifunda saseRio senza uhambo oluhle kakhulu (futhi olungabizi) losuku. Lesi siqhingi siyindawo engenazimoto, ngakho-ke ukuhamba kunqunyelwe kumabhayisekili nezimoto ezidonswa ngamahhashi. Akukho okuningi okufanele kwenziwe kulesi siqhingi, kodwa ukugibela isikebhe kufanelekile.
Petrópolis - Ezintabeni ezingaphandle kweRio. Indawo enhle yokuphola lapho iRio ishisa kakhulu.
Praia do Abricó. Ibhishi lomphakathi elihle kakhulu eliseduze neRio, eliseGrazi, ngemuva kwePrainha. Izinsiza kanye nezinsizakalo zocingo kunqunyelwe, ngakho-ke hlela kusengaphambili.
I-Teresópolis - Elinye idolobha elinezintaba, eduze kwasePetrópolis.
Serra dos Órgãos - Ipaki kaZwelonke ezintabeni ezisentshonalanga neRio.